राजकुमारीको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध, चुप ला’ग्नका लागि दिइन् १९ करोड ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियराजकुमारीको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध, चुप ला’ग्नका लागि दिइन् १९ करोड !
राजकुमारीको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध, चुप ला’ग्नका लागि दिइन् १९ करोड !
काठमाडौं। दु’बइका शा’सक शे’ख मो’हम्मद बि’न रा’शिद अ’ल म’कतुमकी पत्नी राजकुमारी ह’या बि’न्त हु’सेनको आफ्नै ब’डीगार्डसँग अ’वैध सम्बन्ध भएको खुलेको छ । बेलायती ना’गरिक रहेका ती ब’डीगार्डलाई चु’प ला’ग्नको लागि राजकुमारी हयाले १.२ मि’लियन पाउण्ड (१९ करोड रुपैयाँ) र महंगा उपहारहरु दिएको डेलीमेलले दा’वी गरेको छ । राजकुमारीले ब’डीगार्डलाई १२ हजार पा’उण्ड पर्ने घडी, ५० हजार पाउण्ड पर्ने पुरानो श’टग’नसहितका उपहार दिएको रिपोर्टमा दा’वी गरिएको छ ।बेलायतको अदालतका चलेको सु’नुवाइको आधारमा डेलीमेलले यस्तो दा’वी गरेको हो ।
दुबइका शा’सकले राजकुमारी ह’यालाई कुनै जानकारी न’दिइ फेब्रुअरी २०१९ मा श’रिया का’नुनअनुसार राजकुमारी ह’यासँग स’म्बन्धविच्छेद (त’लाक) गरेका थिए । रिपोर्टका अनुसार राजकुमारीका ब’डीगार्ड वि’वाहित थिए तर राजकुमारीसँगको यो अ’वैध सम्बन्धका कारण ब’डीगार्डको वैवाहिक सम्बन्ध वि’च्छेद भयो ।राजकुमारी ह’याले अहिले दुबइ छा’डिसकेकी छिन् र बेलायतमा बस्दै आएकी छिन् । बच्चाहरुको अ’भिभावकत्व आफूले पाउनुपर्ने मा’गसहित राजकुमारी ह’याले बेलायतको अदालतमा मु’द्दा दा’यर गरेकी थिइन् र अदालतले ह’याको पक्षमा फै’सला गरेको थियो । राजकुमारी ह’या दुबइका शा’सककी छैटौं र सबैभन्दा कम उमेरकी पत्नी थिइन् ।
यो अ’वैध स’म्बनध २०१६ मा सुरु भएको मा’निएको छ त्यसपछि ती ब’डीगार्डले राजकुमारी ह’याको लागि पूर्ण रुपमा काम गर्न थालेका थिए ।रिपोर्टका अनुसार ४६ वर्षकी राजकुमारी ह’याको ३७ वर्षका बेलायती ब’डीगार्ड र’सेल फ’लोवरसँग करिब २ वर्ष स’म्बन्ध चलेको थियो । राजकुमारीले र’सेलसँगको आफ्नो अ’वैध सम्बन्धबारे केही न’बोल्नको लागि अन्य ३ ब’डीगार्डलाई पनि करोडौं दिएको वि’श्वास गरिएको छ । राजकुमारी हया २०१८ मा दुबइबाट भा’गेकी थिइन् र अहिले लण्डनमा छिन् । उनी दुई सन्तानकी आमा हुन् । डेलीमेलका अनुसार यस विषयमा ब’डीगार्ड रसेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन अ’स्वीकार गरे । राजकुमारी ह’याले पनि यो सम्बन्धबारे दा’वी ख’ण्डन गर्ने वि’श्वास गरिएको छ ।